‘Atsaharo Ny Famotehana Ny Vondrom-piarahamoninay Noho Ny Arintany Tsy Ho Azonay Ampiasaina Akory’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2015 7:22 GMT
Ny Rhineland, toeram-pitrandrahana arintany mamoaka entona CO2 betsaka indrindra eran'izao tontolo izao. Sary : Ende Gelände
Ity lahatsoratra ity dia mitofotra amin'ny sombiny nosoratan'i Emma Biermann ho an'ny 350.org, fikambanana iray manangana fiaraha-mientana erantany momba ny fiovàn'ny toetrandro, ary naverin'ny Global Voices navoaka ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Tamin'ny Aprily, nanatevina laharana ireo olona efa ho 6.000 nanao tohivakana tao Garzweiler aho, toerana fitrandrahana arintany any andrefan'i Rhineland ao Alemaina. Niraisanay ny hafatra hampitsaharana ny fianteherana amin'ny arintany sy ny hanafainganana ny fikisahana ho any amin'ny angovo azo havaozina izay tokony ho nanomboka omaly ( fanamarihana:11 May raha ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy no teboka hiaingana).
Lasa tanàna haolo i Borschemich sy Immerath, tanàna efa ela nisiana ary nandalovan'ilay tohivakan'olona. Notambazana vola ny mponina tao ary naparitak'ilay orinasa Alemàna mpamokatra herinaratra RWE.
Itarin'ny RWE ilay toerana fahasivy lehibe indrindra erantany fitrandrahana arintany, na eo aza ny trosa, na eo aza ny fanimbàna trano sy toerana fambolena, na eo aza ny taha avoben'ny fandotoana ao amin'ilay faritra sy ny resaka taratra mitera-doza avoakany, ary mazava ho azy fa na dia fantatsika aza ny zavamisy hoe tsy ho azontsika arehitra akory ity arintany ity raha toa isika te-hifehy ny fiovàn'ny toetrandro.
Herr Schmitz, mpamboly avy ao an-tanànan'i Holzweiler, Alemaina. Sary : Emma Biermann
Tsy azo antoka akory aza hoe ahoana no fomba nanombohanay ny resaka. Heveriko fa ilay izaho nanontany raha azy ilay trakitera hitako teo. Ary dia azy. Nitarika fiarasarihana izy io ary nisy sora-baventy mampiseho ny fetra takian'ny olona ho tokony hifaranan'ilay toerana fitrandrahana arintany.
Nifanenana taminà 5.998 izahay ary dia nametraka ribôna mavo ny olona sasany nitsangana teny afovoan'ilay toerana fambolena masomboly tany amin'ny roa na telo taona lasa, ary araka izany, efa tsy hisy intsony. Ny vohitra nisy azy – Holzweiler – no tazana ery aorian'ilay sehatra miezinezina. Tsy mbola fantany na ho isan'ireo holavahana hakarina ety ambony mba hakàna ny arintany ao ambaniny koa ny taniny.
Herr Schmitz, ilay mpamboly nifanena tamiko tamin'izay andro izay, dia niteny tamiko fa ny tsy fahalalàna no tena zavatra ratsy indrindra. Ahoana ho hanomananao na hiatrehanao toe-draharaha iray raha tsy fantatrao raha ao anatin'ny taona vitsy ianao sy ny ankohonanao dia ho afindra toerana? Fanampin'izay, ahoana marina no tena fandehany? Ahoana no hanoloanao ny tanimboly sy ny masombolin'ny olona? Ahoana no ahafahanao manolo ny trano, ny tantara ary ny antom-piveloman'ny olona? Hoy izy, ho azy angamba mety tsy ho ratsy, fa ahoana ny ho an'ny zanany lahy? Inona no ndeha ho ataony?
Raha hakatontsika ilay toerana fitrandrahana, nolazaina taminay fa asa an-jatony no ho very. Saingy eto, tsy ny tantaran'ny asa ho very fotsiny no reko fa hatramin'ny an'ireo vondrom-piarahamonina. Ary tetika maloto no nanaovana azy. Herr Schmitz niteny tamiko fa efa an-taona maro tany aloha no tonga tao amin'ilay vondrom-piarahamonina ny RWE talohan'ny nisian'ny fandravàna. Rehefa nomena vola ho tambin'ny famindràna toerana azy ny mponina tao, dia ny fanoherana no fihetsiny voalohany, araka izay efa nieritreretana azy. “Saingy nohalefahan'ny fotoana ry zareo,” hoy Ing. Schmitz. Manomboka manapaka ny zavatra rehetra manodidina ilay faritra ny RWE, efa mamotika sahady izay rehetra takatry ny tànany, manao toy ny hoe efa an-dàlana ny asa. Avy eo dia noraisin'ny sasany tamin'ireo mponina ilay tolotra. Manomboka miala ny olona sasany ary efa manomboka tsy mahita ireo mpanjifany intsony ireo fandraharahàna ao an-toerana. Ahoana moa no hijanonan'ny mpanao mofo eo raha ny olona ao am-bohitra aza manomboka manjavona tsikelikely? Nony lasa ireo vitsivitsy, dia nanao toy ny fianjeran'ny daomy ilay izy.
Manondro tranobe iray izy sady miteny amiko hoe hopitaly izy io fahiny. Ankehitriny dia trano foana sy voatampitampina hazo. Mponina vitsivitsy no mbola mijanona manohitra eto amin'ity vohitra ity, saingy tsy misy toerana fivarotana tavela, tsy misy fiangonana, na tolotra hafa eo an-toerana. Vohitra hafa efatra no nolazainy tamiko, tanàna efa an-jato taonany, tafiditra ho isan'ireo horavàna ato anatin'ny 15 taona manaraka. Entiny indray aho ho any ambadiky ny trakiterany hijery sorabaventy iray izay misy ny anaran'ireny vohitra ireny ary – toy ny azy – voakasik'ilay olana ihany koa.
Ny 25 Aprily, olona maherin'ny 6.000 no nanao tohivakana nanohitra ny toerana fitrandrahana arintany manaop tafo lanitra ao Garzweiler any Rhineland, Alemàna. Sary: Emma Biermann
30 taona katroka lasa izay Ing Schmitz no nandray anjara tamin'ny tohivakan'olombelona voalohany nataony teto. Mbola manohitra hatrany izy. Tena nampalahelo ahy ny resako taminy, nefa angamba miova ny vanin-taona ary dia aty amin'ny lafy misy ny mpandresy izahay.
Mibaby trosa 31 lavitrisa Euro ny RWE; lasa lafo dia lafo ny vidin'ny arintany, raha tsy resahana ny fampidirana ny masonkarena ivelany; nasiana fepetra ny famokarana arintany ary tonga saina izahay amin'ny hoe tena tsy afaka tokoa handoro ity zavatra maintimainty ity (90% amin'ny tahirinà arintany ao Eorôpa no mila ajanona ao amin'ny tany raha tiantsika ny hajanona ambanin'ny 2 degre ny fisondrotry ny maripàna). Ary izao, efa misy sahady ny fisongan'ireo hetsika vonona hanohitra. Amin'io 14-16 Aogositra ho avy io, hianika ilay toerana fitrandrahana arintany any manana halalina 400 metatra izahay mba hanakana ilay mpangady goavana indrindra eto ambonin'ny tany.